Jilaaga Caanka Ah Ee Will Smith Oo Daboolka Ka Qaaday Sababta Maraykanka Looga Daawan Waayey Koobka Adduunka Iyo Heesta Uu Ka Qaadi Doono Ciyaarta Finalka Ee France vs Croatia – Laacib.net
Jilaaga caanka ah ahna heesaa dunida laga jecel yahay Will Smith ayaa daboolka ka qaaday sababta dalka Maraykanka aan looga xiisaynin ciyaaraha kubadda cagta gaar ahaan Koobka Adduunka.
Will Smith oo qaaday heestii sannadkan lagu xayseysiinayey Koobka Adduunka ayaa waxa uu tibaaxay in gudaha dalka Maraykanka kubadda cagta looga yaqaano macno kale oo ah kubbad kale oo dalkaas laga ciyaaro, taas daraadeedna aanay dad badan xiisaynin eryga oo ay u haystaan kubaddii dalkooda laga ciyarayay uun.
“Koobkii Adduunka 2002 ee Seoul ayaa ayaa iigu horreysay mid aan ka qayb-galo, waanad ogtihiin. Marka aanu Maraykan nahay, kubadda cagta macno kael ayaanu u naqaanaa, waxaanan ogaaday in Maraykanku ay dunida go’doon ka yihiin. Haddii aanu nahay reer Maraykankan, kuma fiicnin kubadda cagta illaa hadda, waase awood mucjiso ahh oo dunida ka dhex-dhaliya isjacayl” Sidaas ayaa uu yidhi Will Smith oo warbaahinta la hadlay.
Heesaagan ahna jilaagan aadka loo jecel yahay, waxa kale oo uu qiray in Koobka Adduunka ee ka socda waddanka Ruushka uu yahay dhacdada ciyaareed ee dunida ugu weyn, isla markaana ay sharaf weyn u tahay inuu heesta xidhitaanka Koobka Adduunka ka qaadi doono garoonka weyn ee Luzhniki ee magaalada Moscow.
Will Smith iyo heesaaga reer Albania ee Era Istrefi iyo waliba Nicky Jam ayaa duubay heesta rasmiga ah ee Koobka Adduunka ee sida tooska ah loo baahiyo, waxaana soo saaray DJ Diplo oo u dhashay Maraykanka, taas oo si toos ah looga qaadi doono xafladda xidhitaanka Koobka Adduunka ka hor inta aanay bilaabannin ciyaarta France iyo Croatia ee Axadda.
Dhinaca kale, Nicky Jam ayaa sheegay inay tahay riyo u rumowday inuu qayb ka yahay heesta xidhitaanka Koobka Adduunka, isla markaana ay wada heesayaan Will Smith.
Sidoo kale, xiddigta fanka reer Albania ee Istrefi ayaa waxay sheegtay inay sharaf weyn u tahay inay ka heesto finalka Koobka Adduunka.
DHAGEYSO | Falanqeynta:- C.Ronaldo Goormuu soo gaarayaa Turino & Hadalka ugu Horeeya uujeedinayo !